नारायणीमा आयो ३ तलाको पानीजहाज, चल्न थाल्यो सलल (भिडियोसहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/नारायणीमा आयो ३ तलाको पानीजहाज, चल्न थाल्यो सलल (भिडियोसहित)
नारायणीमा आयो ३ तलाको पानीजहाज, चल्न थाल्यो सलल (भिडियोसहित)
चितवन, ७ पुष । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरे चितवनको भरतपुरमा निर्माण गरिएको क्रुजसीपको आइतवार परीक्षण गरिएको छ । जनवरी १ वाट औपचारीक रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सहित आइतवार त्यसको परीक्षण गरिएको हो । साढे दुई तला कु्रजमा २५ जना यात्रु राखेर सोमवार सफल परिक्षण गरिएको हो । नारायणी नदीमा आइतबार क्रुजसीप संचालन गरेर सफल परीक्षण गरेपछि निर्माणकर्ता खुसी भएका छन्। लामो समय देखि निर्माण गरिएको कु्रजसिपलाई आज निर्माणस्थलबाट नदीमा पुर्याइएको थियो । परिक्षणका लागि चालक दलका केही सदस्यसहित २५ जना यात्रु बोकेको सिपमा करिब डेढ किलोमिटर यात्रा गरेका थिए।
राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले नारायणी नदिमा क्रुज सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलले नेपालको पहिलो पानी जहाजको रुपमा यसको चर्चा हुने भन्दै खुसी ब्यक्त गरे । उनी दुई वर्ष देखि यसको तयारीमा जुटेका थिए । उनले नेपालमै पहिलो पटक क्रुज सञ्चालन गर्न पाएकोमा खुसी भएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
२ सय ५० जना यात्रु राखेर सञ्चालन गरिने क्रुज जनवरी देखि विधिवत सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जनाएको छ । दसैंअघि नै संचालन गर्ने भनिए पनि डिजाइन फेरिएका कारण समय लागेको हो । क्रुजमा भीआइपी कक्ष, सेल्फी लिने तथा चलचित्र सुटिङ गर्न मिल्ने युनिट पनि थप गरिएको छ ।
एक सय फिट लम्बाइ र २५ फिट चौडाइको मिनी पानीजहाज निमार्ण गरिएको छ । यो जहाज नर्वेजियन प्रविधिबाट निमार्ण गरिएको कँडेलले बताए । निर्माणका लागि भारतको केरलावाट प्राविधिकहरु मगाइएको थियो । सिंगापुर र भारतका प्राविधिकले नारायणी नदीको गहिराइको अध्ययन गरेर संचालन गर्ने सकिने निस्कर्ष निकालेका थिए ।
उक्त सीप एक करोड लागतमा निर्माण गरिएको कम्पनीले दावी गरेको छ । निर्माण पूरा भइसक्दा यसको लागत १५ करोड पुग्ने कम्पनीको अनुमान छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि
करिब प्रतिघण्टा ३५ किलो मिटर संचालन हुनेछ । अहिले एउटा मात्र मेशिन राखेर सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । सञ्चालकको काभ्रेघाटदेखि गोलाघाटसम्म संचालन गर्ने योजना छ । त्यस्तै, हिउँदामा देवघाटसम्म संचालन गर्ने बताइएको छ । कु्रजमा थप एउटा इन्जिन, महिला र पुरुषका लागि शौचालय र सिसा लगाउन बाँकी छ ।
पाएनन् रविले न्या,य,एक लाख धरौटीमा रन्जना अदा,लतवाट छुटेपछि नि,रास भएका ससुराले यसो भने(भिडियो हेर्नुस्)
कोरोनाको खोप कहिले बन्छ ? कोरोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? अत्ति महत्वपुर्ण भिडियो हेर्नुस
कृष्ण कंडेल परिवार सहित पहिलोपटक मिडियामा ( भिडियो हेर्नुहोस् )